ယခုနှစ် ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ ဖြစ်ဖို့ အတွက်သာ ဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဟ ခဲ့တဲ့ #ဒရော့ဘာ | Football Myanmar
ယခုနှစ် ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ ဖြစ်ဖို့ အတွက်သာ ဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဟ ခဲ့တဲ့ #ဒရော့ဘာ
November 27, 2018 Adam Willian	11 Comments
ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ ဂန္တဝင် တိုက်စစ်မှူး ဟောင်း ဒီဒီယာ ဒရော့ဘာ က ၄င်းရဲ့ အသင်း ဟောင်း ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တော့တင်ဟမ် နဲ့ ပွဲစဉ် မှာ ရှုံးနိမ့် ခဲ့ပေမယ့် မကြာခင် မှာ အနိုင် ရဖို့ ကြိုးစား မှာ ဖြစ်ကြောင်း နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဆု ကို စိန်ခေါ် မှာ ဖြစ်ကြောင်း တိုကျို မှာ ပြုလုပ် တဲ့ ချယ်လ်ဆီး ပရိသတ် များ နဲ့ တွေ့ဆုံ ပြီး အမေးအဖြေ များ ပြုလုပ် ခဲ့တဲ့ အစီအစဉ် မှာ ဖြေကြား ခဲ့ပါတယ် ။
ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တော့တင်ဟမ် နဲ့ ပွဲစဉ် မတိုင်ခင် အထိ မန်စီးတီး ၊ လီဗာပူး တို့ နည်းတူ ပရီးမီးယားလိဂ် ရှုံးပွဲ မရှိ ခဲ့ပေမယ့် တော့တင်ဟမ် နဲ့ ပွဲ မှာတော့ ထို မှတ်တမ်း ဟာ ပျက်ပြယ် ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ထို့ အတွက် ကြောင့် ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ အမှတ် ပေး ဇယား မှာလည်း အဆင့် ၄ နေရာ ကို ဆင်းပေး ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ထို ပွဲစဉ် မှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ တော့တင်ဟမ် အသင်း ကို ခြေစွမ်းပိုင်း အရ ၊ ရလဒ်ပိုင်း အရ ယှဉ်နိုင်စွမ်း မရှိ ခဲ့ပဲ ရှုံးနိမ့် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ သို့ ပေမယ့် လည်း ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဟောင်း ဒီဒီယာ ဒရော့ဘာ က တော့ ၄င်း ရဲ့ အသင်းဟောင်း ဟာ မကြာခင် မှာ ရလဒ် ကောင်း တွေ ပြန်လည် ရယူ နိုင်လိမ့်မယ် လို့ မျှော်လင့် ထားကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ် ။
ဒရော့ဘာ က ” ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ ဒီနှစ် ဘောလုံး ရာသီ မှာ စွမ်းရည်ကောင်း တွေ ပြသ ထားနေ ပါတယ် ။ အခုလို ရှုံးပွဲ ကြုံတွေ့ ရတယ် ဆိုတာ ဘောလုံး လောက မှာ ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထ ရှိတဲ့ အနေအထား တွေပါ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် မှာ ရှုံးပွဲ မကြုံတွေ့ ရခဲ့ဘူး ဆိုရင် တောင် နောင်တချိန် မှာ ရှုံးနိုင် တဲ့ ပွဲစဉ် တွေ ရှိနိုင် ပါတယ် ။ ”
” တော့တင်ဟမ် ကို ရှုံးနိမ့် ခဲ့ရတာ ကတော့ ဘယ်တော့ မှ ကောင်းတဲ့ အရာ ဖြစ်လာ မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဘာကြောင့် လဲ ဆိုတော့ ဒါ ဟာ ဒါဘီ ပွဲစဉ် ဖြစ်သလို အဲ့ဒီ ပွဲစဉ် မှာ သူတို့ က ကျွန်တော် တို့ အသင်း ကို အသာ ရခဲ့လို့ ပါပဲ ။ ကျွန်တော် ကတော့ ချယ်လ်ဆီး အနေနဲ့ ဒီ အရှုံး ရလဒ် ကနေ အမြန်ဆုံး ပြန်လာ နိုင်ဖို့ မျှော်လင့် ထားပါတယ် ။ ”
” ဒီ အရှုံး ရလဒ် ကနေ အကောင်းဆုံး သင်ခန်းစာ ပြန်ယူ ပြီး နောက်ပိုင်း မှာ နိုင်ပွဲ တွေ ဆက်တိုက် ပြန်ရ အောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ဖို့ လိုပါတယ် ။ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် က ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ ဆု ကို ရရှိ ဖို့ပါ ။ ခင်ဗျား အနေနဲ့ ချယ်လ်ဆီး လို အသင်းကြီး တသင်း အတွက် ကစား ပေးနေ ရပြီ ဆိုရင် နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း ဆုဖလား တခုခု ရယူ ဖို့ မျှော်လင့်ချက် ထားရမှာ ပါပဲ ။ ”
” ဒီနှစ် ဘောလုံး ရာသီ မှာ အသင်း ဟာ ကောင်းသော စတင်မှု နဲ့ စတင် ထားတာ ကြောင့် မကြာခင် မှာ ဒီ အရှုံးရလဒ် ကနေ ပြန်လာ မှာ အသေအချာ ပါပဲ ။ ” လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ် ။ ဆက်လက်ပြီး ဒရော့ဘာ က သူ့ရဲ့ ရှေ့ဆက် ရမယ့် ဘဝ ခရီး အတွက် ဘယ်လို ပုံစံ နဲ့ ဖြတ်သန်း ဖို့ စဉ်းစား ထားသလဲ ဆိုတာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လည်း ဖွင့်ဟ ခဲ့ပါတယ် ။
ဒရော့ဘာ က ” ကျွန်တော့ ရဲ့ ရှေ့ဆက် ရမယ့် ခရီး အတွက် ကျွန်တော် ပုံစံ ၂ မျိုး ရာထား ပါတယ် ။ တခု က မန်နေဂျာ လောက ထဲ ဝင်ဖို့ ။ တခု က ကျွန်တော် ဟာ ကစားသမား ဘဝ နဲ့ ဆက် သွားချင် ပါသေးတယ် ။ ကျွန်တော် ဟာ လိဂ် အမျိုးမျိုး မှာ ကစား ခဲ့ဖူး သလို ရောက်ခဲ့တဲ အသင်း တွေမှာ လည်း မှတ်တမ်းကောင်း တခုခု ချန်ထား တတ်ပါတယ် ။ ”
” ကျွန်တော့ အတွက် သာမန် လူသား တယောက် အနေနဲ့ မတူညီ တဲ့ နိုင်ငံ တွေမှာ အခုလို ကစား ရတာ ဟာ အတွေ့အကြုံ ကောင်း တခု ကို ရရှိ လိုက်ခြင်း ပါပဲ ။ ကျွန်တော် ဟာ ဒီ ကမ္ဘာ ကြီး ပေါ် က လူသား တယောက်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံယူ နိုင်ဖို့ က အရေးကြီး ပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ် ။
Previous Postလက်ရှိ အချိန် ယူနိုက်တက် အတွက် အသင့်တော်ဆုံး နည်းပြ က ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားတဲ့ #ဘန်နီမက္ကာသီNext Postမော်ရင်ဟိုရဲ့ လက်အောက်မှာ ကစားဖို့ ဆိုရင် သည်းခံမှုရှိမှရမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ လုခ်ရှော
11 thoughts on “ယခုနှစ် ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ ဖြစ်ဖို့ အတွက်သာ ဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဟ ခဲ့တဲ့ #ဒရော့ဘာ”
✅ DATING SIMULATOR ♡ http://sexinyourcity.ml ♥
Choose Gerlinde from Farnham if you wantabeautiful and fun callgirl.
edwardhpnk.x.fc2.com Stay current on developments in areas of interest to you.
Valuable information. Fortunate me I found your website by chance, and I’m shocked why this coincidence didn’t took place in advance! I bookmarked it.
I got this web page from my friend who informed me regarding this website and now this time I am browsing this site and reading very informative articles or reviews here.